အတိတ်က ဖြစ်ရပ်တွေကို ၀န်ခံမှ မြန်မာပြည် ရှေ့ကို တိုးနိုင်မည် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ အတိတ်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေအပေါ် ၀န်ခံသင့်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် ကင်တားနား က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ်အတွက် ဂွမ်ဂျူး လူ့အခွင့်အရေးဆု ကိုမင်းကိုနိုင် လက်ခံရယူ
တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းရမည် လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ ဖိအားပေးပြောကြားဖို့ သြစတြေးလျ ဝန်ကြီးချုပ်ကို စာပို့
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု ကင်တားနား ဝေဖန်ပြစ်တင် ကွန်မင့်များ
Mr. Tomas Ojea Quintana,
You have no right to order Myanmar what to do. We will do as we like. You look likeawolf withacalf met atastream. You and UNHCR are saying "Either you or your father". You are violating the right of Myanmar. Myanmar is independent and sovereign country. Do you want to bully on Myanmar, less developed country? You should know Myanmar is notacalf: Burma isaTiger in Asia. We will crush all enemies. Aug 06, 2012 02:29 AM
အနာကိုသိမှ ဆေးကောင်းရှာလို့ရမှာပါ။ ၀န်ခံပါ။ရှက်စရာမလိုပါဘူး။လူတိုင်းမှားတတ်ပါ။ ၀န်ခံရဲတဲ့သူဟာ သတ်တိရှိတဲ့သူပါ။ လေးစာစရာကောင်းတဲ့သူပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အမုားများဝန်ခံခဲ့လို ပြသနာကို မြန်၂ရှင်းနိင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတွေက ပိုသည်းခံတတ်ပါတယ်။ အပြောတော့ခံရတာပေါ့ဗျာ
Hey, STUPID GUY
ARE YOU MAKING PROBLEM IN MYANMAR OR TRYING TO GET DEMOCRACY ?
I THINK, YOU ARE MAKING PROBLEM. DON'T COME AGAIN TO MYANMAR BECAUSE YOU ARE NOT GOOD GUY AND YOUR ARE NOT SUITABLR FOR YOUR POST.
Feb 06, 2012 06:34 PM